Faallada Buugga Cun Rahaas ‘Eat That Frog’ – Brian Tracy – Unigovec – The University of Government and Economics
Buuggaan oo loogu magac daray ‘Eat That Frog waxaa qoray Brian Tracy. Sida sawirka kore kaaga muuqata ‘Cun Rahaas waa buug wax soo saar leh, oo si sahlan loo akhrin karo, waxaana ku jira istaraatiijiyado wax ku ool ah oo aad u sarreeya iyo xeelado wanaagsan oo qof kasta u baahan yahay.
Buuggaan caanka ah ayaa si qurux badan loogu sharaxay sida qofka uu ku noqon karo qof miro-dhal leh iyo sida qofka uu ugu gudbi karo dib udhigista. Waa buug akhrintiisa ay aad u gaaban tahay oo lagu sharaxay 21 siyaabood *Xeeladood oo waaweyn oo lagu joojin karo dib u dhigista iyo in lagu qaban karo wax badan waliba waqti yar.
Waa kumaa qoraagga buuggaan?
Qoraagga buugga Brian Tracy, waa mid ka mid ah macallimiinta horumarinta adduunka ee ugu caansan dunida. Wuxuu qoray in ka badan 70 buugaag, sida ku xusan boggiisa intarnetka, wuxuu la taliyey in ka badan 1,000 shirkadood wuxuuna la kulmay in kabadan 5,000,000 oo qof 5,000 oo qudbado uu ka jeediyey iyo aqoon isweydaarsiyo kala duwan ee gudaha Mareykanka, Kanada iyo 70 wadan oo adduunka oo dhan ah.
Buuggaan ayaa leh xeerar cajiib ah. Xeerka ugu horreeya ee cunidda raha waa: ‘Haddii ay tahay inaad cunto labo rah, cun midka ugu foosha xun marka hore.’
The first rule of frog-eating is: ‘If you have to eat two frogs, eat the ugliest one first.’
Xeerkaas ayaa macnaheeda ah haddii ay ku hortaalo labo hawlood oo muhiim ah, marka hore ku biloow mida ugu adag, uguna muhiimsan hawsha. Xeerkaas ayaa ah ‘Naftaada edbi si aad u bilowdid isla markaaba kadibna adkeyso ilaa howsha ay ka dhamaanayso intaadan usii gudbin wax kale. Tan uga fikir sidii ‘tijaabo.’ Ula hadal sidii tartan shaqsiyeed.
Ka hortag jirrabaadda inaad ku bilowdo hawsha ugu fudud. Si joogto ah u xusuusnow naftaada in mid ka mid ah go’aamada ugu muhiimsan ee aad sameysid maalin kasta ay tahay xulashadaada waxa aad isla markiiba sameyn doontid iyo waxa aad sameyn doontid goor dambe, haddii aad sameyso gabi ahaanba.
Xeerka labaad ee cunitaanka raha waa: ‘Haddii ay tahay inaad cunto raha nool, haba yaraatee wax lacag ah kuma fadhido inaad fiiriso oo aad eegto muddo aad u dheer.’
Furaha lagu gaarayo heerarka sare ee waxqabadka iyo wax soo saarka ayaa adiga kuu ah inaad horumariso caado-nololeedka cimriga dheer ee wax ka qabashada hawshaada ugu horreysa subax kasta. Waa inaad sameysataa nidaamka ‘Cunista rahaaga’ ka hor intaadan wax kale qaban, oo aadan waqti badan ku qaadan inaad ka fikirto. “
Xeerarka buuggaan ayaa ka kooban illaa 21 xeerar, haddii la yiraahdo dhammaan xeerarka ha lawada sharaxo macnihiisa waa in buugga oo dhan la turjubaanay.
Xaqiiqda ayaa ah marwalbo waxaan aqrinaa buuggaag iyo maqaalo kusaabsan kobcinta iyo dhiirogelinta nolosha balse aad ayay u yaryihiin kuwa nolosheena wax ka bedelay. Lama diidana inaad hormariso naftaada, laakiin kawaran haddii aad iska aqriso fikradaha iyo aragtiyada aad dhaxashay oo aadan naftaada wax ugu qaban weyso? Tuke Somalism waxaan ku daabacnay qoraalo cilmiyeysan kuwaasoo isuga jira kuwa cilmi iyo kuwa dhiiro-gelin u ah nolosheenna. Hamigeena ayaa ah in nolosha bulshadeenna wax ka bedelno. Mana jirto cid intaas ka badan ku garab qaban karto ee aanan ka ahayn Alle s,w,c.
Dunida waxaa ka buuxa dad sugaayo in loo yimaado oo la dhiiro-geliyo, si ay u noqdaan qofka ay rabaan inay noqdaan. Dhibaatada jirta ayaa ah ma jiro qof adiga kuu imaanaayo oo ku bad-baadinaayo.
Dadka noocaan oo kale waa sida dad taagan wadada oo sugaayo baskii ay raaci lahayeen, halka wax bas ah uusan soo soconin. Haddii aysan mas’uul ka ahayn noloshooda, oo cadaadis isasaari waayaan waxay ku dhameysan doonaan noloshooda inay wax sugaan. Waa sidaas dadka intiisa badan.
Boqolkiiba 2% oo kali ayaa dadka shaqeyn kara iyada oo aan kormeer lagu hayn. Dadkaas waxaa la yiraahdaa ”Hoggaamiye.” waa nooca shaqsiyadeed ee lagaaga baahnaa inaad noqoto, waadna noqon kartaa haddii aad go’aansato.
Qoraaladaas iyo kuwa kale oo badan wuxuu kamid yahay qoraalada aan kusoo daabici doona buuggayga 5-ta Tiir ee Guusha – InshAllah
PrevPreviousQoraal Kooban oo Ku Saabsan Somalism
Post Views: 920 Buuggaan oo loogu magac daray ‘Eat That Frog waxaa qoray Brian Tracy.
UNIGOVEC - The University of Government and Economic	September 10, 2019
Post Views: 691 Somalism waa akademiyad waxbarasho Online ah oo aad waxwalbo ka barani karto